Qalabka Raadiyaha Raadiyaha, Gudbiyaha Xarunta Raadiyaha, Saldhigyada TV-ga Dijital ah
Si loo daboolo baahi kasta oo warbaahineed
Naqshadeynta iyo Bixinta Adduunka oo dhan - FMUSER waxay siisaa xirmooyin qalab baahinta oo dhameystiran iyo xalal dhameystiran oo loogu talagalay idaacadaha adduunka oo dhan, kuwaas oo daboolaya dhammaan noocyada qalabka gudbinta maqalka iyo muuqaalka ee iibka ah - Wax dheeri ah aqriso.
Qiimaha Warshada Tartan - Warshada wax soo saarka heerka koowaad ee aanu leenahay waxay dammaanad qaadeysaa qalabkayaga baahinta tayada sare iyo qiimaha miisaaniyada idaacad kasta. Haddaba, haddii aad raadinayso alaab-qeybiyaha xarunta raadiyaha ugu fiican ama aad u baahan tahay macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xalalka buuxa ee idaacadda, fadlan nala soo xiriir.
Solutions Customized - waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh iyo iibka, kuwaas oo ku siin kara kala duwan oo dhan xalalka habaysan ee baahinta raadiyaha iyo IPTV live streaming madax ilaa cirib. Waxaan haynaa wax kasta oo aad rabto, laga bilaabo xirmada gudbiyaha, nidaamka anteenada oo dhameystiran ilaa qalabka baahinta tooska ah, iwm - Guji si aad u Booqato.
Keliya Tartan - Iyada oo tobanaan sano oo qalab baahinta ah soo saarista iyo waayo-aragnimada suuqgeynta, FMUSER BROADCAST waxay hubin kartaa jumlo-iibiyaha FM-ga ama qalabka idaacadaha iibsada alaabada baahinta qiimaha ugu tartanka badan iyo tayada sare leh.
Wax Soo Saarka Waxtarka Sare - 30+, 3K+, 30K+, 300K+, iyo xitaa jumlo iibsi bishiiba mar ah iyo dalabaadka tafaariiqda dhib kuma ahaan doonaan FMUSER BROADCAST. Waad ku mahadsan tahay warshadeena iyo shabakada iibka qaangaarka ah, waxaad ka heli kartaa FMUSER dhammaan goobaha wax iibsiga - Amazon, Ali Express, Alibaba, iyo eBay, iwm.
Baakadaha ka hor Kahor keenista kama dambaysta ah ee alaabada baahinta la dalbado, waxaa lagu tijaabin doonaa si adag oo waafaqsan tillaabooyinka alxanka qaybaha> chassis meeting>> tijaabada maqalka>Tijaabada gabowga hore ee warshadda, si ay ula kulmaan heerarka ugu adag. Waxaan kuu xaqiijineynaa tayada ugu fiican sida had iyo jeer.
Bixiyaha ugu Fiican Waxaan bixinaa xirmo dhameystiran oo qalabka idaacadaha ah oo loogu talagalay hawlwadeenada raadiyaha, qalabka baahinta tooska ah ee barashada fogaanta & shirarka khadka tooska ah, iyo xalalka soo koobida & hagida iibsashada baahinta raadiyaha gaarka ah & ganacsiga.
Ka go'an in ay kaamil ah xallinta gudbinta baahinta maqalka iyo muuqaalka ah ee xaalad kasta oo baahinta ah, waxaan nahay FMUSER BADBAADINTA.
Ilaa hadda, waxaan si guul leh u aasaasnay ​​iskaashi muddada-dheer macaamiisha ka badan 200 dal iyo gobol shanta qaaradood.
—— Waxaan bixinaa qalab idaacadaha iyo xalal dhameystiran oo loogu talagalay Kaniisadda lagu wado iyo masraxa wadista, shirkadaha iyo kooxaha, wakaaladaha sharciyeynta, isbitaalada, warshadaha isboortiga, shirkadaha qaranka, iyo idaacadaha bulshada. In ka badan kumanaan xalal baahinta raadiyaha la habeeyey ayaa si guul leh loogu abuuray idaacadaha shaqsi iyo kuwa ganacsiba. >>In ka badan
—— Waxaan bixinaa taxane ah xalal xirfadeed idaacadaha adduunka oo dhan, sida xirmo raadiyaha oo dhameystiran, qalabka qolka injineernimada xarunta raadiyaha, xirmo istuudiyo raadiyaha oo dhameystiran, nidaamka anteenada oo dhameystiran oo qalabeysan, qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha, iwm. waxaad kaloo isticmaali kartaa our IPTV cod-bixiye, cod-bixiye, iyo cod-bixiye oo ay la socdaan kuwa kale qalabka baahinta tooska ah si aad u bilowdo ama u sii wadato faafinta tooska ah ee cudurka faafa ee 2021, Waxa kale oo aanu samaynay boqolaal o kala duwanisku darka alaabta ugu habboon adiga, dabcan, dhammaan waxay la yimaadaan qiimo miisaaniyadeed iyo tayo wanaagsan. >>In ka badan
Dhammaan alaabada baahinta iyo xalalka FMUSER waxaa loo ballan qaaday in si wanaagsan loo sameeyay, miisaaniyad, iyo waxqabad sare.
Taxanaha Gudbiyaha baahinta FM/TV - Taxanahan wuxuu leeyahay astaamo noocyo badan oo awood ah, awood la isku hagaajin karo, awoodda gudbinta calaamadaha RF oo xooggan, iyo codsi ballaaran oo kala duwan. Wargeysyadan taxanaha ah ayaa loo isticmaali karaa xarumaha baahinta ee cabbirrada kala duwan, gaar ahaan kuwa hadda jira ee uu saameeyay cudurka faafa, doorkooda ayaa si gaar ah u muuqda.
Taxanaha Antenna ee FM/TV - Taxanahan wuxuu leeyahay sifooyinka qiimo jaban, waxqabad xooggan, faa'iido sare, rakibid ku habboon oo degdeg ah, iyo qaab cusub. Badeecadu waxay dabooshaa anteenada wareegta ah, anteenada diyaaradda dhulka, anteenada gaariga, anteenada dipole FM, anteenada yagi, anteenada ballaaran, iyo anteenada booska
Taxanaha Qalabka Socodka Tooska ah - Taxanuhu waxa uu ka kooban yahay qalab-qalab IPTV, IPTV decoders, iyo IPTV transcoder oo loogu talagalay baahinta tooska ah, oo leh hal kanaal, kanaal 4, iyo 16 kanaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Si fudud loo qaadi karo oo ay muujinayso daahitaan hooseeya, H.264/H.265 iyo borotokoollada shabakado badan oo la taageeray
Qalabka loogu talagalay Qolka Injineerinka Raadiyaha - Taxanahan wuxuu ka kooban yahay dhowr wiil oo waaweyn, qaarkood aad ayey uga qaalisan yihiin qalabka aan kor ku soo sheegnay, oo ay ku jiraan shaandhada RF ee awoodda sare leh, FM-ka iyo TV-ga isku dhafka ah, culeyska culeyska sare ee RF, iwm.